Rusununguko rweBlog | Martech Zone
Svondo, May 26, 2013 Svondo, May 26, 2013 Douglas Karr
Kana isu tichifunga nezvemapepanhau azvino uno, tinofunga nezvemakambani makuru enhau akagadza hunhu, zviyero nemaitiro. Mavari tinowana vanoongorora chokwadi, vatori venhau vakadzidza kuYunivhesiti, vapepeti vane ruzivo uye vaparidzi vane simba. Kune chikamu chikuru, isu tichiri kutarisa kumusoro kuvatori venhau sevachengeti vechokwadi. Isu tinovimba kuti ivo vapedza kwavo kushingairira kwakakodzera kana vachiongorora nekumhan'ara nyaya.
Zvino izvo mablog azadza Internet uye chero munhu akasununguka kuburitsa pfungwa dzavo, vamwe vezvematongerwo enyika vekuAmerica vari kubvunza kana kwete rusununguko rwekudhinda inofanirwa kunyorera kumablog. Vanoona mutsauko pakati Bepanhau uye iyo blog. Zvakaipa zvakanyanya kuti vezvematongerwo enyika vedu varege kudzidza nhoroondo, zvakadaro. Chekutanga Amendment chakagamuchirwa musi waZvita 15, 1791, seimwe yezvigadziriso gumi zvinosanganisira Bumbiro rekodzero.
Kongiresi haifanire kuita mutemo zvine chekuita nekumisikidzwa kwechitendero, kana kurambidza kuitiswa mahara; kana kudzikisira rusununguko rwekutaura, kana rwevezvenhau; kana kodzero yevanhu yekuungana zvine rugare, uye kukumbira hurumende kuti igadzirise zvichemo.
Pepanhau rekutanga muNyika Idzva raive Publick Zviitiko, 3 mapeji ekunyora ayo akakurumidza kuvharwa sezvo isina kubvumidzwa nechero chiremera. Hezvino zvakange zvakaita iro bepanhau.
Pakupera kwehondo muna 1783 pakanga paine mapepanhau makumi mana nemana akadhindwa. Mazhinji eaya aive mapepanhau aiparadzira propaganda, aive asina kutendeka, uye akanyorwa kukwidza hasha dzevadzvanyiriri. Shanduko yaive ichiuya uye bhurogu… iro rekudhinda raikurumidza kuve kiyi mukuparadzira izwi. Makore zana gare gare, pakanga paine mapepa anosvika 43 11,314 akasiyana akanyorwa mukuverengwa kwevanhu muna 1880. Pakazosvika ma1890 pepanhau rekutanga kurova miriyoni imwe yemakopi rakabuda. Mazhinji acho akadhindwa kubva mumatura uye akatengeswa nesendi pazuva.
Mune mamwe mazwi, the mapepanhau ekutanga anga akafanana chaizvo nemablog atiri kuverenga nhasi. Kutenga muchinda uye kunyora bepanhau rako kwaisada dzidzo chaiyo uye hapana mvumo. Sezvo vezvenhau nepepanhau zvakashanduka, hapana humbowo hwekuti zvinyorwa zvacho zvaive nani kana kuti zvaive zvakatendeka.
Yenhau Yenyaya yakabata muUnited States uye inoenderera nanhasi. Midhiya zvinoburitswa zvinowanzo kuverekera mune zvematongerwo enyika uye kushandisa masvikiro avo kuenderera mberi nekuparadzira kusarura uku. Uye kunyangwe paine rusaruro, vese vanodzivirirwa pasi pekutanga Amendment.
Izvo hazvireve kuti ini handiremekedze utapi venhau. Uye ini ndinoda hutapi venhau kuti ndipone. Ini ndinotenda kuti kudzidzisa vatapi venhau kuti vaongorore, kuchengeta mabhaisikopo kuhurumende yedu, makambani edu uye nharaunda yedu kwakanyanya kukosha kupfuura nakare kose Blogger havawanzo kuita yakadzika kuchera (kunyange izvo zviri kuchinja). Isu tinowanzo kungotsvagisa pamusoro pemisoro apo nyanzvi dzenhau dzinopihwa imwe nguva nezviwanikwa zvekuchera zvakadzika.
Ini handisi kusiyanisa kuchengetedzwa kwemapepanhau neyavo mabloggi, zvakadaro. Hapana anogona kuratidza mutsetse panogumira utapi venhau uye blogging inotanga Kune mamwe anoshamisa mabloggi ane zvigadzirwa izvo zviri nharo zviri nani zvakanyorwa uye zvakadzama zvakadzama kupfuura zvimwe zvezvinyorwa zvatinoona kubva kunhau dzazvino dzekutengesa Uye hapana kusiyanisa svikiro. Mapepanhau ave kuverengwa online zvakanyanya kupfuura zvaari muingi nepepa.
Vezvematongerwo enyika vedu vemazuva ano vanofanirwa kuziva kuti blogger yemazuva ano yakafanana zvikuru nevatori venhau vakawana dziviriro muna 1791 pakapasiswa First Amendment. Rusununguko irworwo rwaisave pamusoro pebasa remunhu ainyora mazwi mune zvakanyanya sekunge aive mazwi iwo pachawo. Ndiyo dzvanya vanhu kana svikiro? Ini ndinoendesa kuti zvingave kana zvese zviri zviviri. Chinangwa chedziviriro ndechekuona kuti chero munhu aigona kugovana zvavanofunga, mazano uye kunyange maonero munharaunda yakasununguka…
Ini ndere rusununguko rwevezvenhau, uye nekupokana nekutyorwa kweBumbiro reMitemo kunyarara nechisimba uye kwete nechikonzero zvichemo kana kushoropodzwa, kwakarurama kana kusaruramisira, kwevagari vedu vachipesana nemaitiro evamiriri vavo. Thomas Jefferson
Vezvematongerwo enyika vedu vemazuva ano vari kubvunza rusununguko rweblog nekuda kwezvikonzero chaizvo izvo madzitateguru edu akatsvaga kuchengetedza mutepanhau neFirst Amendment.